आमिर खानका ५ उत्कृष्ट फिल्म, हेर्नुस् युट्युबमा :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज ५
'कयामत से कयामत तक' का राजदेखि 'दंगल' का महावीर सिंह फोगटसम्म आउँदा उनी हरेकजसो भूमिकामा खरो उत्रिने अभिनेता हुन्। करिअरको सुरुआती वर्षमा संख्यात्मक फिल्म खेल्ने उनी विस्तारै गुणात्मक फिल्म खेल्न थाले। फिल्मको विषय चयनका कुरामा संवेदनशील उनले हरेक फिल्मलाई गम्भीर रूपमा लिए।
यही विशेषताले करिब तीन दशकमा आमिरले आफूलाई व्यावसायिक तर गम्भीर फिल्म खेल्ने जिम्मेवार कलाकारका रुपमा स्थापित गरेका छन्। मनोरञ्जन र कलात्मक दुवै पक्षबाट सन्तुलित फिल्म खेल्ने उनका कयौं फिल्मले व्यवसायिक कीर्तिमान बनाएका छन्। यही कारण उनी बलिउडका 'मिस्टर पर्फेक्सनिस्ट' का रूपमा परिचित छन्।
पात्र अनुसार 'रिइन्भेन्ट' गर्न सफल अभिनेतासँगै निर्माता र निर्देशकका रूपमा पनि उनी सफल छन्। यो सूचीमा आमिरले अभिनय, निर्देशन र निर्माण गरेका पाँच राम्रा प्रतिनिधि फिल्म राखिएको छ जो युट्युबमा उपलब्ध छन्।
खासमा यो क्रिकेट प्रतिस्पर्धा खेल मात्रै नभई स्वाभिमान र राष्ट्रियताको लडाइँ बन्छ। असम्भवलाई सम्भव बनाउने आममान्छेका क्षमताहरूको कथा हो, 'लगान'।
उनीहरू बीचको समानता र भिन्नताले उनीहरूको सम्बन्धलाई कसरी नयाँ मोड दिन्छ? यसबाट उनीहरूले जीवनबारे कस्तो पाठ सिक्छन्? 'दिल चाहता है' को मुख्य कथा यही हो।
'दिल चाहता है' प्रस्तुतिका हिसाबले आफ्नो समयको 'फ्रेस' फिल्म थियो। खासगरी फिल्ममा आमिर खानको ठाडो पारिएको कपालको स्टाइल र चिउँडोनेरको दाह्री राख्ने शैली युवा पुस्तामाझ नयाँ फेसन बनेको थियो।
चुस्त पटकथा, रमाइला संवाद, सुन्दर सिनेमाटोग्राफी र गीत-संगीत पनि 'दिल चाहता है' का विशेषता हुन्। 'लगान' मा ग्रामीण परिवेशका युवाको भूमिकापछि सहरीया युवाको भूमिकामा आमिरले यो फिल्मबाट पनि मन जितेका थिए।
आमिर मात्रै नभई यो सैफ अली खानको करिअर उकास्ने फिल्म पनि हो। यसमा अक्षय खन्ना आफूभन्दा धेरै वर्ष जेठी 'डिभोर्सी' महिला डिम्पल कपाडियासँग प्रेममा पर्ने चित्रकारको भूमिकामा छन्। 'लभ एट फस्ट साइट' भन्दा फरक प्रेम सम्बन्धको चित्रण पनि यो फिल्मको अर्को विशेषता थियो।
घरघरका केटाकेटी र अभिभावकसँग जोडिएको विषयमा बनेको यो फिल्मले नेसनल अवार्डसमेत जितेको थियो। रमाइलो कुरा, 'तारे जमीन पर' बाट फिल्म फेयर अवार्डमा इशानको भूमिका निर्वाह गरेका दरशील सफारी मुख्य अभिनेता र आमिर खान सहायक अभिनेताका रूपमा मनोनित भएका थिए। बाल कलाकार मुख्य अभिनेताको विधामा मनोनयनमा परेको यो पहिलो पटक थियो।
त्यो खास घटनाक्रम के होला? इतिहासका क्रान्तिकारी पात्र बनेर रिहर्सल गर्दागर्दै कसरी उनीहरूको मन र जीवनमै कसरी राजनीतिले प्रवेश गर्छ? थाहा पाउन हेर्नुस्, 'रंग दे बसन्ती'।
आमिरकी श्रीमती पनि रहेकी किरण रावको निर्देशनमा बनेको 'धोबीघाट' मा आमिर चित्रकार अरूणको भूमिकामा छन्। उनीसँगै फिल्ममा अमेरिकामा बैंकरका रुपमा काम गर्ने शाइ, धोबी मुन्ना र गृहिणी यास्मिनको कथा जोडिएको छ। यी पात्रको अन्तर्सम्बन्ध कतै सोझो रुपमा त कतै घुमाउरो गरी जोडिएको छ।
यी चारै पात्रसँग जोडिएको अर्को पात्र हो, मुम्बई सहर र यहाँको धोबीघाट। मुम्बई सहरको भीड र भीडबीचको एक्लोपनको कथालाई 'धोबीघाट' ले पत्रपत्रमा देखाउँछ। जटिल वाचनशैलीमा कथा बुनिएको फिल्मका सन्दर्भ बुझ्न कतिपय ठाउँमा दर्शकले मिहेनत गर्नुपर्ने भए पनि यो फिल्म सुन्दर छ।
अलग अलग वर्ग र पृष्ठभूमिका पात्रमार्फत फिल्मले मुम्बई सहरको जीवन र सौन्दर्य सँगसँगै देखाउँछ। घटनाभन्दा पात्रको अन्तरमनसँग खेलिएको 'धोबीघाट' विम्बहरूसँग खेलिएको फिल्म हो।
वेब सिरिजका लागि हेमरराजले गरे सरोज र सौगातसँग 'टिमअप'